China OEM Hand Sanitizer ụlọ ọrụ na-emepụta | Zhongrong
Otu Companylọ Ọrụ
Aka Sanitizer TECH-BIO
Usemụaka Na-eji Aka Iji Aka Ha Aka TECH-BIO
50ml Aka Sanitizer TECH-BIO
500ml Nkwado Aka Sanitizer TECH-BIO
OEM Aka nri
75% Mmanya Na-egbu Mgbu TECH-BIO
50ml 75% Mmanya Na-egbu Mgbu TECH-BIO
500ml 75% Mmanya Na-egbu Mgbu TECH-BIO
2.5L 75% Mmanya Na-egbu Mgbu TECH-BIO
75% Mmanya Na-egbu Mmanya na IBC / Drum
Disinfection Hichapụ TECH-BIO
1 mpempe Mmanya / Hyamine Hichapụ
10 iberibe mmanya / Hyamine Hichapụ
Mpempe 50 Mmanya na-egbu egbu / Hyamine Hichapụ
Mpekere 150 Mmanya / Hyamine Hichapụ
Chemical Raw Ihe
50ml Aka Sanitizer jel TECH-BIO
500ml Osisi Aka Sanitizer GEL TECH-BIO
N'okpuru nduzi nke covid-19, Aka Sanitizer na-abụ mkpa nlekọta onwe anyị na ndụ anyị kwa ụbọchị ọkachasị n'ebe ụfọdụ ọhaneze dịka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ahịa, họtel, wdg. Ngwaahịa a nwere mmanya 75% nke nwere ike igbu coronavirus na nje ndị ọzọ iji kpuchido ahụike anyị nke ọma.
OEM & ODM nabatara
N'okpuru nduzi nke covid-19, Aka Sanitizer na-abụ mkpa nlekọta onwe anyị na ndụ anyị kwa ụbọchị ọkachasị n'ebe ụfọdụ ọhaneze dịka ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ụlọ ahịa, họtel, wdg. Ngwaahịa a nwere mmanya 75% nke nwere ike igbu coronavirus na nje ndị ọzọ iji kpuchido ahụike anyị nke ọma. Ka anyị na-emepụta mmanya na-aba n'anya, ọnụahịa anyị ga-abụ nke asọmpi na ogo dị elu maka aka anyị. E wezụga, anyị gafere OA, FDA, na ISO nkwenye. Anyị na-ebupụta ikaNyochaa-BIO -eme ka ọ dị ka Nke 1 ika maka disinfection na China dị ka anyị nwere mma mmanya kacha mma na China. Anyị bụ onye ndu na China maka teknụzụ ethanol. Anyị nwere ihe dị ka narị puku square square square 500,000 na mpaghara Hebei, China. E hiwere ụlọ ọrụ anyị na 1999. Agbanyeghị, anyị nwekwara ike ịmeOEM & ODM ịgbakwunye akara ngosi nke ndị ahịa ma hazie olu net. Na-atụ anya ịbụ onye gị na ụwa ibe ma mezuo mmeri-mmeri ọnọdụ!
Na-asọpụrụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ China-Tech, ZhongRong Technology Corporation Ltd. (koodu ngwaahịa: 836455) bụ ọkachamara na ngalaba nke Biochemical, Chemicals Chemicals, Fine Chemicals na New Energy. Dabere na ebumnuche "na-akwalite ọganihu ọha na eze site na nkwado mmepe", ụlọ ọrụ ahụ gbadoro anya na R&D, mmepụta na ire ahịa nke ethanol dị ka wellas ihe mgbago ya na mgbada na -emepụta ihe karịrị afọ iri abụọ, ma tinye onwe ya ịbụ onye na-ere asọmpi kachasị asọmpi maka ethanol na-abụghị ọka.
Ngwaọrụ: Mmanya na-egbu egbu 75% (V / V)
Mpịakọta net: Ngwaahia
Uru: Mmanya Dabere · Environmentally Nchekwa · Triclosan Free · Moisturized
Use: Iji nyere aka wepu nje bacteria na anụ ahụ nwere ike ibute ọrịa na ịmịkọrọ anụ.
Direction: Tinye obere ego na aka wee hichaa ruo mgbe akọrọ.
Dọ aka na ntị: Maka iji ya eme ihe naanị · Ihe na-afụ ọkụ · Zere ikpo ọkụ na ire ọkụ ∙ Zere kọntaktị na anya na anụ gbajiri agbaji
Agaghị arụ ọrụ: Mmiri dị ọcha, Carbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine, Fragrance (ahaziri).
Ozi ndị ọzọEchekwala na ebe akọrọ na akàrà.
Ụbọchị mmebi: afọ 2
AKECKỌ-BIO™ Ihe dị iche
Testedlọ nyocha nwalere: 99,99% Irè megide ọtụtụ ụmụ nje
Emepụtara site na Zhongrong Technology Corporation Ltd.
Tinye: Mba 1 Changqian Road, Fengrun District, Tangshan City, Province Hebei, China
Nkwakọ ngwaahịa na njem
Nke gara aga: 50ml 75% Mmanya Na-egbu Mgbu TECH-BIO
Osote: 500ml Nkwado Aka Sanitizer TECH-BIO
Okwu: Room1602 Vanke Center, No.970 Nanning Rd., Xuhui District, Shanghai 200235 "SH Office）
Ekwentị: +86 21 6470 0198